Sawiro:- Siyaasiyiin samayn weyn ku leh Puntland oo ku biiray Shirka Mucaaradka ee kasocda Nairobi kulama xasaasiya…. - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Sawiro:- Siyaasiyiin samayn weyn ku leh Puntland oo ku biiray Shirka...
Sawiro:- Siyaasiyiin samayn weyn ku leh Puntland oo ku biiray Shirka Mucaaradka ee kasocda Nairobi kulama xasaasiya….
Nairobi (Banaadirsom)-Wararka isa soo taraya ee inaga soo gaaraya Dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in magaalada Nairobi ay kusii qulqulayaan siyaasiyiin badan oo Somali ah kuwaas oo ka qayb galaya shirar toos ah oo usocda Kooxaha Mucaaradka ku ah Dowladda Dhexe.
sida wararkii ugu dambeeyay ee ay Heshay Banaadirsom.com ay xaqiijiyaan waxaa shirkaas ku biiray oo goobjoog ka ah siyaasiin caan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya xildhibaano labada gole ee Baarlamaanka katirsan iyo Dad kale oo aan magac wayn ku lahayn siyaasadda dalka.
Ilaa iyo hadda siyaasiyiinta aanu ognahay ee Nirobi kushirsan waxaa kamid ah Cabdiraxmaan CabdiShakuur oo ah hogaamiyaha xibsiga Wadajir, Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi faarax Siciid Juxa, oo Puntland kasoo jeeda, Xildhibaan Cabduqaadir Cosoble Cali oo kamid ah xisbiyada mucaaradka Somalia, Taliyihii hore ee NISA C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Kenya Maxamed Cali Nuur Ameerika iyo Wasiirkii hore ee Waxbarashada Cabdinuur.
Siyaasiinta ayaa ka shiraya xaaladaha dalka Soomaaliya iyaga oo gaba gabada shirkooda soo saari doono warsaxaafadeed ku saabsan waxa ay ka wada hadleen.
Sidoo kale magaalada Nairobi waxaaku sugan qaar kamid madaxda maamul Goboleedyada dalka sida madaxweyne Deni, Xaaf iyo Axmed Madoobe, iyadoona ay jiraan kulamo labada dhinac ay isku arkeyn oo halkaasi kadhacay.